Vaovao - Fampitahana eo amin'ny latabatra azo ampiasaina sy ny latabatra porselana mahazatra
Tombony iray amin'ny latabatra azo ampiasaina raha ampitahaina amin'ny latabatra porselana tsotra dia ny mora entina ary azo averina fenoina rehefa lany. Ny latabatra fanary azo aravona dia somary maivana ary maro no tsy matahotra hianjera, noho izany dia azo aterina amina harona fonosana izy io, tsy misy harona, fantsom-by, bisikileta elektrika ary minivan.
Mandritra ny fizotran'ny fampiasana indray sy famitaovana latabatra azo ampiasaina dia tsy misy tokony hatahorana ho vaky. Rehefa vita, ny mpiasa mpikarakara sakafo dia afaka manipy azy avy hatrany ao anaty fitoeram-bokatra sy famaranana. Tsy mila miahiahy momba ny fikirakirana azy io am-pitandremana izy ireo, ary tsy mora ny mamaky azy io indray, izay manatsara ny fahombiazan'ny asa fisakafoanana.
Raha ampitahaina amin'ireo mpanamboatra teo aloha, ny ankamaroan'izy ireo dia mpanamboatra azo itokisana amin'ny latabatra azo ampiasaina. Manome antoka izy ireo fa afaka manatanteraka famokarana sy famokarana miorina amin'ny fahadiovana sy ny fiarovana ny sakafo, ny karbaona ambany ary ny fiarovana ny tontolo iainana, ary manana loharanon-karena be dia be mba hamatsiana ireo mpaninjara latabatra azo ampiasaina. Ary ny entana ao anatin'ny dingan'ny famokarana, ny famokarana ary ny fonosana dia mifanaraka amin'ny fitsapana tsy mitombina.
Ny latabatra fanary azo arahana koa dia narahin'ny ain'ny olona, ​​latabatra fanary azo ampiasaina amin'ny fiainana mba ahazoana tombony inona?
Voalohany, ao amin'ny trano fisakafoanana misy latabatra azo ampiasaina, tsy dia manadio, dia aza mampiasa tabilao miverina.
Faharoa, raha ny marina, ny latabatra azo ampiasaina dia latabatra feno tontolo iainana ihany koa, satria azo averina ary azo ampiasaina hanamboarana vokatra indostrialy aorian'ny fampiasana azy.
Fahatelo, ny endrika lehibe indrindra dia ny fahadiovana, izay azo ampiasaina tsy amin'ny trano fisakafoanana ihany, fa koa any amin'ny hopitaly, satria ny hopitaly dia mampiasa latabatra azo ampiasaina, ary io no fahita indrindra; fahefatra, ho an'ny trano fisakafoanana sasany, ny fampiasana latabatra azo ampiasaina dia tsy olana ara-pahasalamana ihany, fa safidy tsara kokoa ihany koa ho an'ireo trano fisakafoanana sasany izay tsy mahay manasa teknolojia fanasana. Fahadimy, ny fitehirizana ny mpiasa dia satria ny fisehoana indray mandeha dia afaka mamonjy fotoana sy mpiasa mandritra ny trano fisakafoanana sasany, izay tena mahasoa.
Ny latabatra azo ampiasaina dia vita amin'ny fitaovana PP ho an'ny tontolo iainana, fitaovana famolavolana tsindrona ary havoakan'ny taratra ultraviolet. Ampiasaina be izao amin'ny indostrian'ny fikarakarana, fivarotana lehibe sy fianakaviana. Izy io dia manana ny fahafahany manolo ny latabatra famonoana desinfection boribory. Na dia kely aza ny lakozia dia ampiasaina be io. Namorona tsena matotra izy io. Ny latabatra fiaramanidina miorina amin'ny foto-kevitra momba ny latabatra fiarovana ny tontolo iainana dia manolo tsikelikely sy mameno ny banga eo amin'ny tsena. Ireo vokatra ampiasaina dia azo averina madiodio, voakarakara ary amidy, ary ny tsenan'ny latabatra fiaramanidina dia tsy voafetra.